မိုးညှင်းခရိုင်အတွင်း လှုပ်ခတ်ခဲ့သော မြေငလျင်ကြောင့် အဆိုပါဒေသမှပြည်သူများ ငလျင်လှုပ်ခတ်မ?? - Yangon Media Group
မိုးညှင်းခရိုင်အတွင်း လှုပ်ခတ်ခဲ့သော မြေငလျင်ကြောင့် အဆိုပါဒေသမှပြည်သူများ ငလျင်လှုပ်ခတ်မ??
မိုးညှင်း၊ ဇန်နဝါရီ ၁၇
ကချင် ပြည်နယ် မိုးညှင်းခရိုင်အတွင်း ဇန် နဝါရီ ၁၇ ရက် နံနက်အစောပိုင်းက လှုပ်ခတ်ခဲ့သော မြေငလျင်ကြောင့် အဆိုပါဒေသမှပြည်သူများ ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကို သိသိသာသာခံစားခဲ့ ကြရကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။ အဆိုပါမြေငလျင်သည် ဇန်န ဝါရီ ၁၇ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၄ နာရီ ၉ မိနစ် ၃၄ စက္ကန့်တွင် ကသာမြေငလျင်စခန်းမှ မြောက်ဘက် မိုင် ၅ဝ ခန့်ကွာဝေးသော မိုးညှင်းမြို့ မြောက်နှင့် အရှေ့မြောက်ဘက် ၁ဝ မိုင်ခန့်အကွာတွင် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၂၄ ဒသမ ၉၁ ဒီဂရီ အရှေ့လောင် ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒသမ ၄၃ ဒီဂရီအနက် ခြောက်ကီလိုမီတာကိုဗဟိုပြု၍ အင် အားရစ်ခ်ျစတာစကေး ၅ ဒသမ ၁ အဆင့်ရှိ အသင့်အတင့်ရှိသော မြေငလျင်တစ်ခုလှုပ်သွားကြောင်း တိုင်းထွာရရှိကြောင်း မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
အဆိုပါမြေငလျင်လှုပ်ခတ်မှု ကြောင့် မိုးညှင်းမြို့နယ် အင်းတော် ကြီး၊ နန်းမား၊ ဟိုပင်၊ မိုးကောင်းအတွင်းရှိ ကျေးရွာများတွင် မြေငလျင် လှုပ်ခတ်မှုကို ဒေသခံပြည်သူများ သိသိသာသာခံစားခဲ့ကြရသည်။ ”အခုမနက် ၄ နာရီ ၁ဝ မိနစ် ခန့်လောက်က ငလျင်လှုပ်တာ အိမ် ကိုယိမ်းထိုးခါနေတာပဲ။ လန့်ပြီး အိမ်ရှိလူကုန်နှိုးပြီး အသာလေးငြိမ် ပြီးနေနေရတယ်။ ကြောက်လိုက်တာတစ်ခါမှ အဲဒီလောက်မကြမ်းသလို ပဲ။ ငလျင်လှုပ်ရင် တချို့ဒေသတွေ လူသေကျေပျက်စီးတာ ကြားနေရ တော့ ဘုရားတနေရတာပေါ့။ မိုး ညှင်းမှာတော့ ဘာမှဆိုးဆိုးရွားရွား ဖြစ်တယ်လို့တော့ မကြားမိပါဘူး” ဟု မိုးညှင်းမြို့မှ မထွေးထွေးစိုးက ပြောကြားသည်။ မိုးညှင်းဒေသတွင် ယခင်က မြေငလျင်လှုပ်ခတ်မှုများ မကြာခ ဏဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသော်လည်း ယနေ့ နံနက်ပိုင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့သော မြေငလျင် ၏ လှုပ်ခတ်မှုအရှိန်သည် ပြင်းထန် ခဲ့သောကြောင့် ဒေသခံပြည်သူများ သိသာစွာခံစားခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။
”ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်အကုန်ကနေ ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်အတွင်း အချိန်အခါမဲ့မိုးရွာ သွန်းခြင်း၊ ရေကြီးခြင်း၊ အအေး ဓာတ်လွန်ကဲခြင်း၊ အပူချိန်မြင့်မား ခြင်းနဲ့ သဘာဝအတိုင်းမဟုတ်တဲ့ ဖောက်ပြန်တဲ့ရာသီဥတုဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး မြေငလျင်လှုပ်ခတ် မှုတွေ ရှိနိုင်တယ်။ တောင်သူတွေ အတွက် သတိထားရမှာက စပါး၊ ပြောင်း၊ ပဲ၊ နှမ်း၊ ငရုတ်တွေ အပျက် အစီးရှိနိုင်တယ်ဟု ကချင်ပြည်နယ်မိုး ဇလဌာနမှပြည်နယ် တာဝန်ခံဦး တင်ထိုက်က ပြောကြားသည်။ အဆိုပါငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့် မိုးညှင်းခရိုင်အတွင်း၌ အဆောက်အ အုံ၊ ကျွဲ၊ နွားတိရစ္ဆာန်နှင့် လူများ ထိခိုက်ပျက်စီးမှု တစ်စုံတစ်ရာမရှိ ကြောင်း လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ များထံမှ သိရသည်။
မြန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်စပ်ဂိတ်များကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နယ်စပ်ဂိတ်များအဖြစ် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးနော?
သီပေါဟော်သို့ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဧည့်သည်များ လာရောက်မှု များပြားနေ
ရန်ကုန်ဘက်ခြမ်းဒလတံတားတည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများဩဂုတ်၁ဝရက် ညပိုင်းတွင်စတင်မည်